တုန်လှုပ် စေသော အသံ သည် ပွင့်လင်းသော ဂီတ ပလက်ဖောင်း ကို အဆင့်မြှင့် သည် - Pandaily
တုန်လှုပ် စေသော အသံ သည် ပွင့်လင်းသော ဂီတ ပလက်ဖောင်း ကို အဆင့်မြှင့် သည်
Feb 17, 2022, 20:45ညနေ 2022/02/18 14:27:01 Pandaily
ကြာသပတေး နေ့တွင် Bytedance ၏ တုန်လှုပ် နေသော အသံ သည် အဆင့်မြှင့်တင် ခြင်းကို ကြေငြာ ခဲ့သည်ကုမ္ပဏီ၏ ပွင့်လင်းသော ဂီတ ပလက်ဖောင်း “Zhijing Xinghe”. အဆိုပါ အဆင့် မြှင့်တင် ရေး ဂီတ သမားများ သူတို့ရဲ့ အလုပ် စီမံခန့်ခွဲ ဖို့ တစ်ဦး ပြည့်စုံ သော အထုပ် ပေး မယ့် ဝန်ဆောင်မှု များနှင့် ပရိုမိုး ရှင်း များ အများအပြား မိတ်ဆက် ပါလိမ့်မယ်, အသွားအလာ နှင့် စွမ်းဆောင်ရည် အချိန် ပိုမို ရရှိ စဉ် ။
လက်ရှိတွင် Zhijing Xinghe ၀ န်ဆောင်မှု ပလက်ဖောင်း သည် သီချင်း မြှင့်တင် ခြင်း၊ တေးရေး ဆရာ နှင့်အ ဆို တော် ကိုက်ညီ ခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် အချက်အလက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသော အခြေခံ ၀ န်ဆောင်မှု စနစ်တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ပလက် ဖော င်းသည် ဂီတ စတူဒီယို များနှင့် ဂီတသမား များအတွက် အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်သော မြှင့်တင် ရေးနှင့် အေဂျင်စီ ဖြန့်ဖြူး ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်သည်။ Buzzyin ၏ ဂီတ ဖြန့်ဖြူး ရေး လမ်းကြောင်း သည် ဂီတ ပလက်ဖောင်း ၂၀၀ ကျော်နှင့် နိုင်ငံ နှင့် ဒေသ ၁၀၀ ကျော်ကို လွှမ်းခြုံ ထားသည်။
ထို့အပြင် ပလက်ဖောင်း သည် ဂီတ မူပိုင်ခွင့် ပိုင်ရှင် များ၊ စတူဒီယို များနှင့် မြှင့်တင်ရေး ကုမ္ပဏီများ အတွက် မြှင့်တင်ရေး ပညာရှင်များ နှင့်အ ရင်းအမြစ် များကိုထောက်ပံ့ ပေးနိုင်ပြီး ပညာရှင်များ အား တောင်းခံ ခြင်းနှင့် တာ ၀ န် ပေးခြင်း ဖြင့် မြှင့်တင်ရေး တွင်ပါ ၀ င်ရန် လှုံ့ဆော် ပေးနိုင်သည်။ လက္ရွိမွာေတာ့ Buzzyin မွာ တက္ႂကြ တဲ့ ေတးဂီတ ျမႇင့္တင္ သူ ၁ သိန္းေက်ာ္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
ဂီတ ပလက် ဖော င်းသည် မတူညီသော ဂီတသမား များ၏ လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း ရန် နှစ်စဉ် အစီအစဉ် သုံးခု ဖြစ်သော Smart Heat Program, Xinghe Program နှင့် Super Volume Program တို့ ကိုစတင်ခဲ့သည်။ Zhihei အစီအစဉ်သည် မူရင်း ဂီတသမား များအား စင်မြင့် ပေါ်သို့ ၀ င်ရောက် နိုင် ရန်၊ ပရိသတ် အခြေစိုက်စခန်း ခိုင်မာ စေရန်၊ ဂီတ ကိုမြှင့်တင် ရန်နှင့် ကြီးမားသော အသွားအလာ နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု လမ်းညွှန် များပေး ခြင်းဖြင့် ပိုမို ကြီးမားသော စင်မြင့် သို့ ၀ င်ရောက် ရန် အခွင့်အလမ်း များပေး ရန်ကူညီ သည်။ နဂါးငွေ့တန်း သည် ကျော်ကြားသော ဂီတသမား များနှင့် ထိပ်တန်း အမှတ်တံဆိပ် များအတွက် ပြသ ရန်စီစဉ်ထားသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Super Volume Program သည် အနုပညာရှင် အားလုံး၏ ဂီတ ကိုမြှင့်တင် ရန်နှင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိ ရန်အတွက် ပြည့်စုံသော ပံ့ပိုးမှု အစီအစဉ်များကို ပေးလိမ့်မည်။ အစီအစဉ် သုံး ခုအတွက် တိကျသော အစီအမံများကို ယခုနှစ်တွင် စတ င်မည်ဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:ဇန်နဝါရီ လအတွင်း ဒေါ်လာ ၂ ၆၆ သန်း ရရှိ ခဲ့သည့် Vibrato နှင့် Vibrato
Yinyin ဂီတ လုပ်ငန်းမှ တာဝန်ရှိ သူတစ် ဦး က လူသိရှင်ကြား ၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် မြှင့်တင် ခြင်းသည် ဂီတ လုပ်ငန်း နယ်ပယ် ရှိ ပလက်ဖောင်း များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ရင်ဆိုင် နေရသော နာကျင်မှု အချက်များ ဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ပလက်ဖောင်း အသစ်သည် ကြေငြာ ခြင်း၊ သီချင်း ရေး ခြင်း၊ အိုင် ပီ လှုပ်ရှား မှုများနှင့် အခြေခံ ၀ န်ဆောင်မှုများ စသည့် အဓိက စွမ်းရည် များကိုပေါင်းစပ် ခြင်းအားဖြင့် ဂီတသမား များအတွက် တစ်နေရာ တည်း တွင် ၀ န်ဆောင်မှု ပလက်ဖောင်း တစ်ခုဖန်တီး ရန်ရည်ရွယ်သည်။ လက္ရွိမွာေတာ့ ပလက္ ေဖာင္း ေပၚမွာ ေန႔စဥ္ သီခ်င္း ေပါင္း ၇ ဘီလ်ံ ကို ထုတ္လႊင့္ ျပသ ေနၿပီး ပလက္ ေဖာင္း ေပၚက ေတးသံ ရွင္ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ဟာ တစ္ ႏွစ္အတြင္း ပရိသတ္ ႏွစ္ဆ တိုးလာ ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
ဇာတ်လမ်း တစ်ပုဒ် လျှင် ၁ ယွမ် မှ စတင်၍ တိုတောင်းသော ပြဇာတ် အကြောင်းအရာ ငွေပေးချေ မှုပုံစံ ကိုစစ်ဆေး ပါ
Chunyin ၏ အစ်မ သည် Chunyin ကို အသုံးပြု၍ ဇာတ်လမ်း တို အတွက် ငွေပေးချေ မှုပုံစံ ကိုစတင် စမ်းသပ် ခဲ့ပြီး ဇာတ်လမ်းတွဲ တစ်ခု လျှင် ၁ ယွမ် (ဒေါ်လာ ၀. ၁၆) မှ စတင်ခဲ့သည်။
Chuntyin သည် ၂၀၂၁ ဒေတာ အစီရင်ခံစာကို အသုံးပြုသူ ဦး စားပေး ဖော်ပြ သည်
ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တွင် Vanyin သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် အချက်အလက် အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အသုံးပြုသူ ဦး စားပေး မှုများ၊ အကြောင်းအရာ ဖန်တီး မှုနှင့် စီးပွား ရေးဆိုင်ရာ တန်ဖိုး များအရ ပလက်ဖောင်း တွင် အပြောင်းအလဲ များ ကိုဤ အစီရင်ခံစာ ကဖော်ပြသည်။